Sei Zvapupu zvaJehovha Zvisingapembereri Krisimasi? | Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mixe Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tankarana Tarascan Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Nhema: Zvapupu zvaJehovha hazvitendi muna Jesu ndokusaka zvisingapembereri Krisimasi.
Chokwadi: Tiri vaKristu. Tinotenda kuti Jesu Kristu chete ndiye achaita kuti vanhu vaponeswe.—Mabasa 4:12.
Nhema: Munopesanisa mhuri nokudzidzisa vanhu kuti vasapemberera Krisimasi.
Chokwadi: Tine hanya chaizvo nemhuri dzevanhu, uye tinoshandisa Bhaibheri kuti tivabatsire kuva nemhuri dzakabatana.
Nhema: Munoruzirira zvakawanda zvinoitwa paKrisimasi zvakadai sekupanana zvipo, kubatana kunoita vanhu panyika panguva iyoyo, uye kuitira vamwe zvakanaka.
Chokwadi: Tinoedza kuva vanhu vane rupo uye vane rugare nevamwe zuva rimwe nerimwe. (Zvirevo 11:25; VaRoma 12:18) Somuenzaniso, patinoita misangano yedu uye patinoparidza tinenge tichiita zvinoenderana nemurayiro waJesu wokuti: “ Makagamuchira pachena, ipai pachena. ” (Mateu 10:8) Uyezve, tinoita kuti vanhu vazive kuti Umambo hwaMwari chete ndihwo huchaita kuti pasi pano pave nerugare.—Mateu 10:7.
Jesu akatirayira kuti tiyeuke zuva rekufa kwake, kwete rekuberekwa kwake.—Ruka 22:19, 20.
Vaapostora vaJesu uye vadzidzi vepakutanga-tanga vakanga vasingapembereri Krisimasi. Bhuku rinonzi New Catholic Encyclopedia rinotaura kuti “ mutambo wokupemberera kuberekwa kwaJesu wakazotanga gore ra243 [C.E.] rapfuura, ” patova nemakore anopfuura 100 muapostora wekupedzisira afa.
Hapana uchapupu hunoratidza kuti Jesu akaberekwa musi wa25 December; zuva rekuberekwa kwake harina kunyorwa muBhaibheri.
Chinoita kuti titi Mwari haafariri Krisimasi imhaka yekuti yakatanga mutsika dzechihedheni.—2 VaKorinde 6:17.
Hamuoni here kuti kusapemberera Krisimasi kunoita kuti musafarirwa nevamwe?
Vakawanda vachiri kupemberera Krisimasi kunyange zvazvo vachiziva kuti yakatangira muchihedheni uye kuti haitsigirwi neBhaibheri. Vanhu vakadaro vanogona kubvunza kuti: Sei vaKristu vachifanira kuita zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vasafarirwa nevamwe? Havaoni here kuti zvavanoita zvinoita kuti vasafarirwa nevamwe?
Bhaibheri rinotikurudzira kuti tishandise ‘ simba redu rokufunga ’ kwete kungoita vanagundamusaira. (VaRoma 12:1, 2) Rinotidzidzisa kuti tikoshese chokwadi. (Johani 4:23, 24) Saka, kunyange zvazvo tiine hanya nemaonero atinoitwa nevamwe, tinoita zvinotaurwa neBhaibheri kunyange kana zvichireva kuti tichavengwa.
Kunyange zvazvo tisingapembereri Krisimasi, tinoremekedza kodzero yemumwe nemumwe yekusarudza zvaanoda panyaya iyi. Hativhiringidzi vanhu vanenge vachipemberera Krisimasi.
Rudo Nemufaro Zvinowanikwa Here Panguva yeKrisimasi?
Kuwana nguva yokuva nehama neshamwari, kubatsira vanotambura, uye kuyeuka Jesu—zvose izvi zvinokosha. Chii chinonyanya kukosha?
Ndezvipi Zvinotendwa neZvapupu zvaJehovha?
Zvapupu zvaJehovha Zvinotenda Muna Jesu Here?
Zvapupu zvaJehovha Zvinofunga Kuti Ndizvo Zvine Chitendero Chechokwadi Here?
Zvapupu zvaJehovha Zvinoti Mazuva 6 Akasikwa Zvinhu Aiva Akareba Maawa 24 Here?